कास्कीमा पत्रकारमाथी प्रहरी आक्रामक हुनुका रहस्यहरु : ओम हमाल – JanaSanchar.com
कास्कीमा पत्रकारमाथी प्रहरी आक्रामक हुनुका रहस्यहरु : ओम हमाल
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर १८, बुधबार) १६:२०
कतै यिनै कानून्भन्दा माथि रहेको अनुभूति दिलाउन खोज्ने निश्चित नेता तथा पत्रकारहरु राजनीतिक आस्था राख्ने र प्रहरीका गलत कामकारवाहीको बिरोध गर्ने पत्रकारहरुबिरुद्ध सुराकी त गरिरहेका छैनन् ? यो गम्भीर बिषय हो। के तिनी आजीवन सत्तामा टिकीरहन्छन र ?
जनताको दुईतिहाइ बहुमत पाएको दाबी गर्ने कथित कम्युनिष्टका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका केही पत्रकार शोषित-पिडित र दुखि गरीब जनताको आवाज बुलन्द गर्ने पत्रकारहरुदेखि तर्सिनु स्वाभाविक हो। पोखरामा यतिबिघ्न पत्रकारहरु गिरफ्तार हुँदा पनि नेपाल पत्रकार महासंघले ससक्त रुपमा आवाज उठाउन सकिरहेको छैन। किन नेपाल पत्रकार महासंघ यति बिघ्न पत्रकार गिरफ्तार हुँदा पनि जोडतोडका साथ् बोल्न सकिरहेको छैन ? यो भने सोचनीय बिषय हो। जनताको मतद्वारा देशभरका सत्ता कब्जा गरेका पार्टीका समर्थक पत्रकारहरु नेतृत्वमा रहेकाकारण पत्रकारहरु गिरफ्तार हुँदा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ नबोलेको पो हो कि ? नेपाल पत्रकार महासंघमा सत्ताको छायाँ परेको हो कि ?
जनता सुसुचित गराउने पत्रकार गिरफ्तार भएको समाचार बाहिर आउँदा रास्ट्रिय तथा अन्तररास्ट्रिय स्तरमा आफु सम्बद्ध सत्त्तारुढ नेकपाको बदनाम हुने डर हाल नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व गरिरहेकाहरुसंग छ कि जस्तो देखिन्छ। बिकाश र सम्वृद्धिको ठेक्का लिएका सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सोषित पिडित जनताको मुख बन्द गरेर के साँच्चिकै नेपालमा बिकास र सम्वृद्धि आउला र ? त्यसमा पनि राज्यको चौंथो अंग मानिएको नेपाली पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ नै पत्रकार गिरफ्तार हुँदा मौन बस्न खोज्नु लज्जास्पद कुरा हो।
अहिले समग्र पत्रकारहरुको समस्या आउँदा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व बोल्न नसक्नुमा महासंघभित्र एकपटक सुद्धिकरण अभियान चलाउनु आबस्यक देखिएको छ। नत्र नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीबी पत्रकारहरुको पहुँचभन्दा बाहिर गएको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ। हुन त नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पत्रकारितामा शुद्धिकरण गर्न भन्दै एउटा समिति पनि बनाएको थियो भने पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन समिति पनि निर्माण गरेको थियो। तर ती देखाउने दांत मात्रै भए।
(२०७६ मंसिर १८, बुधबार) १६:२० मा प्रकाशित
संघीय संसदकाे संयुक्त बैठक (२०७७ जेठ २)
प्रतिनिधि सभा बैठक, २०७७ बैशाख २९ गते
रोल्पाको गैरीगाउँमा ब’म वि’स्फोट हुँदा चार बालबालिकाको घटनास्थलमै मृ’त्यु